Shabaab oo sheegtay in ay qabteen Diyaarad Drone | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Shabaab oo sheegtay in ay qabteen Diyaarad Drone
Shabaab oo sheegtay in ay qabteen Diyaarad Drone
Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen diyaarad nooca Drones-ka ah oo ay sheegeen inay ku soo dhacday degaanka Beerxaani oo ku yaalla duleedka magaalada Kismaayo oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee dhaca Koonfurta Soomaaliya.
Warbaahinta Shabaab ayaa sheegtay diyaaradan oo ku xirnaa Kaamirooyin inay ku soo dhacday goob ay maamulaan Shabaab, gacantana lagu dhigay burburkeeda, iyada oo ay ula dhaqaaqeen degaan ay maamulaan oo aysan magaciisa sheegin, iyaga oo baaritaano ku haya.
Diyaaradaha Drones-ka ee wax duuba ayaa dul wareega Saldhigyada Shabaab ay ku leeyihiin Gobolada dalka Soomaaliya, iyadoo Shabaab ay horay u qabteen diyaarado sidan oo kale ugu soo dhacay degaanada ay ku sugan yihiin.
Ma cadda illaa hada diyaaradan inay Shabaab qabteen iyo in kale, marka laga soo tago sheegashadooda, sidoo kale Shabaab weli ma aysan soo bandhigin diyaaradan ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen.
Inta badan Diyaaradaha Drone-ska, ayaa waxaa isticmaala Dowladda Mareykanka oo u adeegsata howlgalada gaarka ah ee ay ku caawiso Ciidamada Soomaaliya.
Maalmihii la soo dhaafay Ciidamada Mareykanka ayaa Duqeymo khasaare dhaliyay waxa ay la beegsadeen saldhigyo Shabaab ay ku leeyihiin degaano ka tirsan Jubbada Hoose, Mareykanka wuxuu sheegay Duqeymahaasi inuu ku dilay Saraakiil iyo Dagaalyahano Shabaab ah.